Printsy Vavy Kamamy Georgette : Nandefa iraka manokana hankahery ny fianakaviana ny Filoha -
AccueilSosialyPrintsy Vavy Kamamy Georgette : Nandefa iraka manokana hankahery ny fianakaviana ny Filoha
Printsy Vavy Kamamy Georgette : Nandefa iraka manokana hankahery ny fianakaviana ny Filoha
12/02/2018 admintriatra Sosialy 0
Mpiaro ny fomban-drazana. Niamboho ny 06 febroary teo ny Printsy vavy Georgette Kamamy, teo amin’ny faha-81 taonany. Endrika iray tsy afa-misaraka amin’ireo fomba amam-panaon’ny Sakalavan’i Menabe izy. Noho izany fahoriana sy fahabangana lehibe ho an’ny foko Sakalava izany, dia nandefa iraka manokana tany Belo ambonin’i Tsiribihina ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina hitondra ny teny fampiononana sy fankaherezana ho an’ny fianakaviana sy ny foko Sakalava. Nitarika ny delegasiona tany an-toerana, ary namangy ny fianakaviana ny sabotsy 10 febroary lasa teo, ny talen’ny kabinetra sivily, Eric Randrasana.
Tao anatin’ny hafatra nampitondrain’ny Filoha sy Ramatoa vadiny, ny fampiononana sy fankaherezana ny fianakavian’ny andriana Kamamy, ny sakalavan’i Menabe, ary ny fiaraha-miory amin’izy ireo noho izao fahabangana eo amin’ny kolontsaina Sakalava izao.
Ny printsy vavy Kamamy Georgette no mpiambina ireo kolontsaina Sakalava nodimbiasina tamin’ireo razambe, ary namela fahabangana lehibe ho an’ny firenena mihitsy. Ny 16 febroary izao no hanatanterahana ny fanitrihana ny vata mangatsiakany.
Tsy nampoizina. ASCB (Boeny) teo amin’ny lehilahy raha ny Fandrefiala (Analamanga) teo amin’ny vehivavy. Ireo no voahosotra ho tompondakan’ny fiadiana ny « Coupe du Président » , taranja basikety, andiany fahatelo. Tontosa ny sabotsy 8 Avrily teo, tetsy ...Tohiny